IXiaomi Mi MIX 4: Uyilo lwayo lutyhilwe kwilungelo elilodwa lomenzi wechiza | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Le patent ibonisa uyilo olunokwenzeka lweXiaomi Mi MIX 4, ngokumangalisa kwikhamera
Kancinci umvelisi waseAsia uyanda eYurophu. UXiaomi ukwazile ukufumana indawo kwicandelo leefowuni ngokunika isisombululo esigqibeleleyo kumaxabiso enkqonkqozo. Kwaye sinomzekelo ocacileyo kusapho lwe-Mi MIX, izixhobo ezinoyilo olugqibeleleyo ngexabiso lokwaphuka komhlaba. Kwaye ujonge ipatent yamva nje, enokubonisa uyilo lwe Xiaomi Mi MIX 4Kucacile ukuba umenzi ufuna ukunika i-twist entsha kusapho lwayo olungumfuziselo ngemvume ye-Mi 9.
Enye yezona zininzi Iimpawu zeXiaomi Mi MIX 3 Yayiyikhamera yayo enesixhobo esityibilikayo sokubonelela ngenkangeleko yescreen sonke, ngaphandle komkhondo wenotshi ecaphukisayo, isenza ukuba isixhobo eso sahluke kwiintshaba zayo. Kwaye, kwinto ebesikwazile ukuyibona kwilungelo lokushicilela elitsha elityhilekileyo, iMi MIX 4 iyakulandela ekhondweni langaphambili.
Le patent iqinisekisa uyilo lweXiaomi Mi MIX 4 ngekhamera esliding
Njengoko ubona kumfanekiso ophethe le migca, sinokubona ukuba uyilo lweXiaomi's Mi MIX 4 lubonakala ngokufana kakhulu nemodeli yangaphambili. Ngokukodwa ngenxa yokuba inendlela efanayo yokuhambisa ukusebenzisa ikhamera yayo yangaphambili. Lumka, ngokweTigerMobiles, umthombo wokuvuza, kuya kubakho inguqulelo enescreen esisongekileyo kwaye iya kubonakala ngokuba nekhamera ye-60 megapixel ukubonelela ngecandelo lokufota elingenakuthelekiswa nanto.
Ngokucacileyo, sijamelene nolunye udaba, ke asinakuqinisekisa ukuba le izakuba yiyo Uyilo oluchanekileyo lweXiaomi Mi MIX 4. Ewe kuyinyani ukuba ifana kakhulu ukuba siyayithelekisa nelungu lokugqibela losapho lwe-MIX, kwaye inyani yokungabandakanyi inotshi yokubonelela ngesiphelo sesikrini sonke iya kuba yeyona nto isengqiqweni ngumenzi waseTshayina , kodwa kuyakufuneka ulinde intetho yayo esemthethweni ukuze ubone ukuba yintoni inkampani e-Beijing-eyothusayo phambi kokuba iphose iintsimbi kubhabho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Xiaomi » Le patent ibonisa uyilo olunokwenzeka lweXiaomi Mi MIX 4, ngokumangalisa kwikhamera
I-OUKITEL K12: I-smartphone entsha kraca